အတော်လေးမကြာခဏသင် "ကိုရွေးချယ်ကြဘူးမိသားစု။ " ဟုအဆိုပါထားသောစာပိုဒ်တိုများကြားနိုင် ထိုကဲ့သို့သောလူမျိုး၏စကားပြောသောအဲဒီမှာရှိဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအဆက်အသွယ်ဖြစ်တယ်, ကိုယ်ကျင့်တရားစံချိန်စံညွှန်းများအဘို့မဟုတ်လျှင်, ရှိသမျှမှာအစည်းအဝေးတွေသူတို့နှင့်အတူမဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ မိသားစုတန်ဖိုးများကို, အစဉ်အလာများနှင့်တဦးတည်းအပိုင်းအစထဲမှာအများအပြားစဉ်မြေးဆက်ဆက်သွယ်အရာအားလုံးအကြောင်းကို, ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာလုပျမှာအားလုံးနေရာမရှိအဘယျသို့ရှိသနည်း
ကျနော်တို့ထားသောစာပိုဒ်တိုများ "မိသားစုတန်ဖိုးများ" ကိုအသုံးပြုရန်စကားပြောပျော်ရွှင်သော်လည်း, ဆက်ဖို့ခက်ခဲကြောင်း။ , ဖြစ်ကောင်း, မိသားစုတန်ဖိုးများကိုသတ်မှတ်နိုင်ဖို့တကယ်ပဲခက်ခဲ - ဤမိသားစုများအတွက်အရေးကြီးပါသည်ကားအဘယ်သို့သူအလားတူမျိုးဗီဇကုဒ်နှင့်အတူလူတစျစုဖော်ရွေအသိုင်းအဝိုင်းပေါင်းစပ်ကြောင်း "ဘိလပ်မြေ" လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောတိုင်းမိသားစုအရာတစ်ခုခုကြောင့်ထွက်လှည့်: တယောက်ယုံကြည်စိတ်ချရန်လိုအပ်သောဖြစ်တယ်, တစ်မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခြားချမ်းသာကြွယ်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာတန်ဖိုးနှစ်ခုမိသားစုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မည်ကြောင်းသိသာသည်။ ထို့ကြောင့်, မိသားစုတန်ဖိုးများဖြစ်သင့်အဘယ်သို့ဆို, မိမိတို့အဆင့်ဆင့်, Impossible မစ်ရှင်အကြောင်းပြောဆိုရန် ပို. ပင်ရန်, တိုင်းမိသားစုအရေးကြီးတဲ့အရာကိုအပေါ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်ရှိပါတယ်, သူ့အဘို့ကိုယ်နှိုက်ကဦးစားပေး။ နှင့်အံ့ဩစရာမရှိ - ငါတို့ရှိသမျှသည်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်, ဆက်ဆံရေးဟာအတော်လေးသစ်ကိုပုံစံဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်, အဆင်ပြေ, ဘုံအကျိုးစီးပွားနေသောထဲမှာအဓိကကမိသားစုတန်ဖိုးများကိုလေးစား။ ဤသည်ဒါခေါ်ကလပ်မိသားစု, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ချစ်ခင်လွှမ်းမိုးနေသည်သို့မဟုတ်မည်သည့်အခန်းကဏ္ဍမှမဟုတ်ခဲ့ပေ။ မိသားစုများအတွက်ခြင်း, ချစ်ခြင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်စဉ်းစား, ဆက်ဆံရေးဤပုံစံ Savage ထင်ရပေမယ့်မည်သို့ပင်ဆိုစေ, သူတို့ကမတည်ရှိ။ မိသားစုဆက်ဆံရေးများစွာသောအခြားပုံစံများရှိပါတယ်အဖြစ်။
ဆက်သွယ်ရေး။ ဒါကြောင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အရေးကြီးပါသည်ဆိုလူတစ်ဦးသည်, သတင်းအချက်အလက်ဝေမျှမိမိတို့၏ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်အကြံဉာဏ်နှင့်အကြံပြုချက်များလက်ခံရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ မကြာခဏမိသားစုများဆက်သွယ်ရေးပုံမှန်စနစ်အဆောက်လုပ်ထားကြသည်မဟုတ်, လူအပေါင်းတို့ဟာသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုများနှင့်စိုးရိမ်ကျနော်တို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ psychoanalysts ဖြစ်ကြသည်။ တစ်မိသားစုရန်တွေ့ပြီးတော့တစ်ဦးယုံကြည်မှုဆက်ဆံရေးမျိုးရှိပြီးဒီထက်တိုက်တဲ့အခါမှာအများကြီးကိစ္စရပ်များကိုဖြေရှင်းပြီးဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုသို့အဖွဲ့ဝင်များကထိုင်ဖို့ထိုက်သည် "ဟုအဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးစားပွဲဝိုင်းမှာ။ "
လေးစားခြင်း။ မိသားစုဝင်များတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုမလေးစားလျှင်, သူတို့သည်အသီးအသီးအခြားအများ၏အမြင်များကိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်မဟုတ်, သူတို့အကြားပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာကလေးတွေသူ့ကိုမကြောက်ဖခင်လေးစားလျက်နှင့်မရမယ်, လေးစားမှုကြောက်ရှုပ်ထွေးဖို့မအရေးကြီးပါသည်။ လေးစားမှုရှုထောသူ့ကိုယ်ပိုင်မှတ်စည်းကြပ်ခြင်းနှင့်နားလည်ရန်ကြိုးစားရန်, အခြားသူတစ်ဦး၏ခံစားခကျြ, လိုအပ်ချက်များနှင့်အတှေးမရကိုလက်မခံဖို့စိတ်အားထက်သန်အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
သင့်မိသားစုများအတွက်အသိ၏အရေးပါမှုကို။ အိမ်ပြန်ကျနော်တို့ချစ်ရသူရဲ့မျက်စိထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုမြင်ချင်, ငါတို့ကအောင်မြင်မှုများနှင့်အောင်ပွဲအပေါ်မူတည်မဟုတျကွောငျးကိုသိရန်, ၎င်းတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာခံစားရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မျှော်လင့်, သင့်အားလပ်ချိန်အသီးအသီးမိသားစုဝင်အခြားတစ်ဦးယခုအချိန်တွင်တွေ့, သူ၏ပြဿနာများအတွက်သူ၏ဦးခေါင်းကိုနှင့်အတူကွယ်ပျောက်မသွားပါလိမ့်မယ်။ အိမ်သူအိမ်သား - တခံတပ်နှင့်မိသားစု - ဆိပ်ဖြစ်ကောင်းလူတိုင်းကလိုချင်သည်။
ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်း။ ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူအားမျှပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်မိသားစုကျွန်တော်ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်မှုကိုနားထောငျဖို့လိုပါရှိရာနောက်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကိုအခြားသူများ '' အမှားတွေကိုခွင့်လွှတ်တတ်ရန်သင်ယူနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပြန်လုပ်မပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
အစဉ်အလာ။ တစ်မိသားစုအဖြစ်လစဉ်လတိုင်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဝါရင့်အဖွား, ရုပ်ရှင်များကိုကြည့်စနေနေ့အပေါ်တစ်စုံတစ်ဦး, တီဗီအခန်း၏ရှေ့မှောက်၌အစည်းအဝေးနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးမှာမေလ9ရက်နေ့ကတမိသားစုလုံးကိုစုသိမ်းရန်တစ်စုံတစ်ဦးကအစဉ်အလာကို (ဘိုးလင်းလမ်းကြား, ရေပန်းခြံမှာ) မြို့အဘို့ရွေးကောက်တော်မူသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမိသားစု၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အစဉ်အလာရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည် အချက်တဲ့အတွက်မနေ့တုန်းကနှင့်တစ်မူထူးခြားသောမိသားစုစေသည်။
တာဝန်ယူမှု။ ဒါကခံစားချက်ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကြောင့်ရှိအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစား, လူအားလုံးအတွက်မွေးရာပါဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကလေးများကျင်းပခဲ့တယ်။ ကြှနျုပျတို့ပွုအရာအားလုံးမိသားစုများ၏အကျိုးအတွက်အဘို့ဖြစ်၏အပေါင်းတို့နှင့်ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်ကိုဤသတိထားဖြစ်သင့်ရှိသောကြောင့်အလုပ်လုပ်အချိန်လေးဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းသူ့မိသားစုကိုရန်မသာတာဝန်ရှိပါသည်ရှိသင့်ပါတယ်။
မိသားစုတန်ဖိုးများကိုများများသာအသုံးအများဆုံးသောသူတို့ကိုစာရင်းပြုစုထားရှိပါသည်။ များစွာသောမိသားစုများအတွက်ပြုလုပ်ဆက်ဆံရေးအတွက်လွတ်လပ်ခွင့်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာကာသ, အမိန့်များနှင့်အစွမ်းကုန်သမာဓိတည်ရှိမှု, ရက်ရောရန်အရေးကြီးပါသည်။
အဆိုပါ choleric ကားအဘယ်သူနည်း
ဆင်ခြင်တုံတရားကုထုံး - အမျိုးအစားများနှင့်နည်းလမ်းများ
အားလုံးအခါသမယများအတွက်ဖက်ရှင်စတိုင်များ - ရှည်လျားသောအင်္ကျီလက်နှင့်အတူဝတ်စားဆင်ယင်
အာသနန်းစံ Butterfield နှင့်အဲလာ Purnell
အဆိုပါ Duke နဲ့ကိန်းဘရစ် Duchess ဓာတ်ပုံနှစ်အရွယ်သမီးထုတ်ဝေခဲ့ကြ
ခေတ်မှီခညျြနှောငျ cardigan 2013
ကလေးများအတွက် Catarrhal ဂလင်းတမျိုး
အမျိုးသမီးတွေ 45 နှစ်များအတွက်နွေရာသီအဘို့အဆင်မြန်း
လက်ချောင်းအပေါ် burrs ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဆောင်းဦးရာသီအတွက် dahlias စောင့်ရှောက်
Reebok အမျိုးသမီးများနေ့ Sneaker
ယင်းပြတင်းပေါ်တစ်ဦးကဟင်းသီးဟင်းရွက်ဥယျာဉ်ကို - စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ကြီးထွားလာအကြံပေးချက်များ
အိတ်တုတ် - ကဘာလဲ, ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာသည်စျေးအနေဖြင့်ခြားနားချက်ကဘာလဲ?